Sishubile isimo KwaDambuza | News24
Sishubile isimo KwaDambuza
Imoto yohlobo lwe-BMW ebimbobombobo izinhlamvu ekutholakale kuyona izidumbu ezine kwaDambuza.PHOTO: supplied
AMAPHOYISA athi ayikaziwa imbangela yokubulawa kwabantu abane izidumbu zabo ezitholakale zidindilize emotweni zinamanxeba okudutshulwa kwaDambuza.
Ngokusho kwamaphoyisa laba badutshulwe ngesibhamu sohlobo lwe-AK47 izintatha ngoMsombuluko kade behamba ngemoto yohlobo lwe-BMW.
Okhulumela amaphoyisa esifundazweni uColonel Thembeka Mbhele uthe indoda eneminyaka engu 27 ubudala ibishayela lemoto ihamba nabanye abane phakathi.
“Bahlangane nabasolwa abangaziwa badubula bebhekise kubona kwashona abane kulabo akade besemotweni okuhlanganisa nowesifazane.”
UMbhele uthe abashonile baphakathi kweminyaka engu 20 kuya kwengu 28 ubudala.
“Imbangela yokubulawa kwabo ibingakaziwa kodwa amaphoyisa asePlessislaer aphenya amacala amane okubulala kanye nelilodwa lokuzama ukubulala.”
Lesigameko senzeka nje ngempelasonto bekungcwatshwa ingxenye yabesilisa abahlanu abaqothwa ngenhlamvu amaphoyisa kade bephuma ukuyogqekeza eHilton emasontweni amabili edlule.
Amaphoyisa abethe chithisaka uMgungundlovu wonke njengoba izimoto bezishaya izitshitshi kuqhuma nezibhamu njengendlela yokubavalelisa ekuthiwa bebephila ngayo.
I-Maritzburg Echo ithole ngemithombo yayo ethembekile ukuthi ukubulawa kwalaba besilisa abane kuhlangane nokubulawa kowesilisa waseGxa uLucky “Moja K” Magwaza (37) obengcwatshwa ngempelasonto.
UMagwaza udutshulwe ngentululwane yezinhlamvu ngoLwesibili olwedlule ngaphandle kwakakhe.
Umthombo we-Maritzburg Echo osondelene naloludaba uthe inkinga iqale emaviki amathathu edlule kade kushiswa imoto yomngani kaMagwaza ohlala kaMachibisa.
“UMagwaza nabangani bakhe bagcine betholile ukuthi obani ababeshise imoto base bebafuna baze babathola maqede bashawa labobalisa.”
Uthi laba abashawa base bakha itulo lokuziphindiselela kuMagwaza nabangani bakhe.
“UMoja bebemsaba kakhulu yingakho bamlalela uyendle bamdubula ebusuku ngaphandle komuzi wakhe.”
Omunye umthombo uthe ngobusuku adutshulwa ngabo, uMoja wabona imoto yohlobo lwePolo eSilver izulazula ngakwakhe wabe esebikela abangani bakhe kuWhatsApp.
Umthombo uqhube wathi uMagwaza ushona nje ubesevele ehlalele ovalweni ngoba ubesazi ukuthi uzulelwa amanqe. Kuthiwa nasekhasini lakhe kuFacebook uke wabhala umyalezo wokuthi ulindele noma ngabe yini.
“UMagwaza ubengaseyena umuntu ogxile kakhulu kwezobugebengu njengoba esebenomuzi wakhe kanye nengoduso. Ubeseyicwecwa impilo yakhe, isikhathi esiningi uma ushiya lempilo yobugebengu abantu bazitshela ukuthi uwena ongasebenzisana namaphoyisa bese befuna ukukususa.”
Umthombo uthe akucaci ukuthi iqembu eladubula uMagwaza elakuphi nendawo.
“Angeke ukwazi ukusho ukuthi iqembu elalaphi ngoba loludaba selujule kakhulu. Abantu abangaphakathi kuphela abaziyo ukuthi kwenzakalani abangakutshela ukuthi iqembu elingaboni ngasolinye nelaMagwaza elakuphi.”